3-ACT Issue2— 3-ACT Film
Shop 3-ACT Issue 2
Previous3-ACT Issue3Next3-ACT Issue2Digital PDF File
3-ACT Issue 2
Issue2ရဲ့ Special Feature မှာ "သူမမြင်ကွင်း" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေရဲ့မြင်ကွင်းကိုတင်ပြတဲ့ဆောင်းပါး၊ မြန်မာရုပ်ရှင်များထဲခေတ်အဆက်အဆက်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ပုံစံမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပုံကို လေ့လာတဲ့ ဆောင်းပါးတွေပါဝင်ပါတယ်။
ထိုဆောင်ပါးများအပြင် ACT-2 တွင် ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦးက သရုပ်ဆောင်များကို ရွေးချယ် ညွှန်ကြားပုံ၊ ၈ ကြိမ်မြောက် ဝဿန်ပွဲတော်ကိုလေ့လာထားခြင်း စသည်နှင့် ACT-3 မှာတော့ ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ Agnès Varda ကိုသုံးသပ်လေ့လာပြီး 3-ACT မှသူမကို အင်တာဗျူးထားသော ဆောင်းပါး၊ Japanese New Wave၊ ရုပ်ရှင်သမိုင်းအဆက် အစရှိတဲ့ ဆောင်းပါးတွေလဲပါဝင်ထားပါတယ်။
The special feature of Issue2ACT-1 falls under the theme “Through Her Lens” which is an emphasis on feminity. It includesareported article on the visions of Myanmar Women Filmmakers andaresearch article on the representation of the roles of female characters through different periods of films in Myanmar.
Apart from these special articles, under ACT-2, we approached Dir Htoo Paing Zaw Oo on the art of directing and auditioning his casts, conductedamultilayered outtake on 8th Wathann Film Festival and many more. Under ACT-3, we wrote about the directorial trait of French New Wave Godmother Agnes Varda followed by an interview with her and 3-ACT on her art, continued to include the second part of film history, explored Japanese New Wave and so on.